10 Zvakakosha Zvinhu zveKunyatso Kugadzira Kugadzira | Martech Zone
10 Zvakakosha Zvinhu zveKunyatso Kugadzira Kugadzira
Svondo, October 18, 2015 Chipiri, Zvita 15, 2020 Douglas Karr
Wrike chikuva chekudyidzana chinoshandiswa kugadzirisa kugadzirwa kwemukati mukati mesangano rako. Ivo vanoreva izvi seinjini yezviri mukati uye vanotsanangura zvinhu gumi - zvese kubva kusangano uye kubva papuratifomu - izvo zvinoita kugadzirwa kwemukati kunyatsoita basa.
Chii chinonzi Injini YeMukati?
Injini yezvinyorwa vanhu, maitiro, uye zvishandiso zvinounza zvemhando yepamusoro, zvakanangwa uye zvinowirirana zvemukati mune akasiyana midhiya mhando, kusanganisira blog zvemukati, webinars, ebook, infographics, mavhidhiyo nemasiraidhi.
Executive Kutenga-mukati - Nekuti kutsvagisa, kusimudzira, dhizaini, uye kuitisa kwechirongwa chekushambadzira zvemukati zvinoda zviwanikwa, unofanirwa kunge uine nguva refu yekutenga-kubva kune vako vatungamiriri.
Strategic Context - Chirongwa chinosanganisira mabasa, marwadzo poindi, intersest, uye zvishuwo zvevateereri sekushandisa
A Content Hub - Izvo zviwanikwa zvepakati apo vateereri vako vanogona kuwana izvo zvakaburitswa zvirimo uye nekwazvinogona kukwidziridzwa kubva.
Vagadziri Vemukati - Chikwata chevanhu vanogona kunyora, kugadzirisa, kuona nekugadzirisa zvirimo.
Vagadziri & Zvemukati Matekinoroji - Graphic vagadziri, vhidhiyo edhita, infographic uye ebook nyanzvi dzinotora izvo zvirimo uye kuzvishandura kuita hunyanzvi.
Zvemagariro Midhiya, Kushambadzira, SEO & Kushambadzira Authomation Kubatana - Kugadzira zvemukati zvakanaka hazvina kukwana, iwe unofanirwa kuve uine timu uye stratregy yekuisimudzira.
Workflows, Asset Management & Kubatana Turu - Chinyorwa chekugadzira zvemukati senge Wrike kwaunogona kushanda kubva pakati, kupa mabasa, nguva, uye kubvumidzwa.
Editorial Calendar - kugona kuronga uye kuratidza zviripfupi uye zverefu-zvemukati zvemukati mezvako chirongwa chirongwa.
Inzwi & Brand Nongedzo - mabhenji ekumaka uye ekutumira mameseji anowanikwa kune vako vanogadzira uye nyanzvi kuti uone kusagadzikana mune zvese zvemukati zvakagadzirwa.
Analytics - chikuva chekutarisa mashandiro echikamu chimwe nechimwe chemukati, mushandirapamwe wega wega, timu yega yega, uye hurongwa hwese.
The Wrike chikuva chinobatanidzwa ne Salesforce, Zapier, Okta, Bitium, Google Apps, Gmail, Apple Mail, Outlook uye zvakare ine yavo yeApple uye iOS nharembozha.
Tiri kushandisa yedu yakabatana chinongedzo mune ino posvo, ive shuwa kusaina uye kutora Wrike yemuedzo wekutyaira!
Tags: android apptsamba yeapurobitiumkarenda yezvinyorwainjini yezvinyorwakugadzirwa kwemukatiGmailgoogle appsios AnwendungoktamataridzikirosalesforceWrikezapier
Chii chinonzi Programmatic Direct Ratidza Kushambadzira?
Kusanganisira Instagram Mifananidzo Yakawedzera Email Engagement 7x